[ 2 hours ago ] Kooxda Liverpool oo muhiimad siineysa heshiiska cusub ee Van Dijk kan marka loo eego Salah	Horyaalka Ingiriiska
[ 2 hours ago ] Koulibaly oo wali diirada u saaran Macalinka Manchester United Solskjaer	Horyaalka Ingiriiska
[ 4 hours ago ] Jurgen Klopp: ‘Liverpool waa Koox isku kalsoon’	Horyaalka Ingiriiska
[ 4 hours ago ] Raphael Varane oo doonaya in uu ka tago Real Madrid	Horyaalka Ingiriiska
[ 5 hours ago ] Wararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Heshiiska Paul Pogba ee Manchester United iyo Qodobo kale	Suuqa kala iibsiga
HomeHoryaalka IngiriiskaCavani Oo Halis Ugu Jira In Sedex Kulan La Ganaaxo , Maxaa U Sabab Ah ?
November 30, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Maanta 0
Edinson Cavani ayaa ka danbeeyey guuldaradii shalay soo kooxda Southampton kulan kamid ah horyaalka ay ka hortimaaday kooxda Man United.
Haatan waxaa socda baaritaan ku aadan faallo cunsuriyad ah oo kusoo qoray bartii Instagram, sida lagu daabacay wargeyska Sky Sports.
Weeraryahanka Manchester United Edinson Cavani, oo 33 jir ah, ayaa sabab ahaay guushii Axadii gaartay kooxda wuxuuna labo gool ka dhaliyey kooxda Southampton, waxa ay ciyaarta kusoo dhamaatay 3-2 guushana ku raacday Man United. Waxay aheyd goolashiisa labaad iyo seddexaad ee sideed kulan uu ka ciyaaray kooxda weyn ee Ingariiska.
Haatan, si kastaba ha ahaatee, Sky Sports ayaa soo warisay in Cavani uu ka baxay jawiga abaarta goolasha.
Sky ayaa qortay in FA-ga (Xiriirka Kubada Cagta Ingriiska) la filayo inay baaritaan ku sameeyaan 33 jirkaan adeegsaday “eray la xiriira cunsuriyada” ee Instagram kadib markii ay soo dhamaatay asagoo la wadaagay qoraal ciyaarta taageerayaashiisa. Boostada hada waa laga saaray, laakiin Cavani wali waxaa lafilayaa in baaritaan lagu sameeyo.
Xilli ciyaareedkan ka hor, FA-gu wuxuu cusbooneysiiyay sharciyo adag ee ku saabsan cunsuriyadda iyo dhaqanka takoorka. Marka laga hadlayo dabeecadaha midab kala sooca ee baraha bulshada, ganaax ugu yaraan seddex kulan ayaa lagu dabaqayaa. United ayaan wali ka hadlin mowduucan.
Manchester United ayaa kulanka soo socota wajihi doonta Paris Saint-Germain Arbacada kulan ka tirsan Champions League. Kadib Cavani ayaa ka hor imaan kara kooxdiisii ​​hore, oo uu ka tirsanaa intii u dhaxeysay xagaagii 2013 ilaa 2020. Wuxuu kooxda ka tagay markii oo dhamaaday qandaraaskiisa horaantii sanadkan.
Wararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Heshiiska Paul Pogba ee Manchester United iyo Qodobo kale
Kooxda Liverpool oo muhiimad siineysa heshiiska cusub ee Van Dijk kan marka loo eego Salah
Koulibaly oo wali diirada u saaran Macalinka Manchester United Solskjaer
Jurgen Klopp: ‘Liverpool waa Koox isku kalsoon’
Raphael Varane oo doonaya in uu ka tago Real Madrid
Kylian Mbappe oo xaqiijiyay wadahadalada qandaraaska cusub ee Paris Saint-Germain
Wararka Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Caawa: Mbappe oo cadeeyay koox uu doonayo iyo qodobo kale
Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Kumaa ku guuleystay koobab badan oo waaweyn
Kevin De Bruyne ayaa laga yaabaa inuu seego kulanka Manchester City ay la ciyaareyso Liverpool
Mikel Arteta oo ka hadlay qorshayaasha suuqa kala iibsiga ee Arsenal ee bisha Janaayo iyo mustaqbalka Balogun
Mikel Arteta: ‘Frank Lampard wuxuu u qalmaa in waqti badan la siiyo Chelsea’
Wararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Gabriel Veron oo ku biiri kara Man Utd iyo Qodobo kale
Atletico Madrid oo Waqtiga dhimashada guul ka gaartay Eibar Kulan ka tirsan Horyaalka la-liga
Liverpool oo guul daro kala kulantay Burnley Kulan ka tirsan Horyaalka Premier League
Real Madrid ‘kama fiirsan doonto inay si joogta ah u iibiso Martin Odegaard ‘